Burburka Saldanadda Maakhir | allsanaag
Burburka Saldanadda Maakhir
Wadani iyo Kulmiye ma waxay heshiis ku yihiin burburka Saldandda Maakhir.
Xisbiyada beelaha Isaaq ee Kulmiye iyo Wadani ee ka jira Hargaysa, ayaa arin kasta oo dhexdooda ah isku khilaafsan oo aan haba yaraatee wax heshiis iyo wada hadal lahayn . Laakiinse waxa jirta arin ay Xisbiyada Kulmiye iyo wadani ay heshiis ku yihiin oo ay ka wada shaqeeyaan. Taas oo ah sidii ay u burburin lahaayeen Saldanada ugu d’ada weyn geeska Afrika iyo Bariga dhexe oo ay isaga danbeeyeen hogaankeeda Garaad Cali dable, Garaad Cabdale iyo Garaad Maxamuud Cali Shire.
Madaxda beelaha Isaaq ayaa Sodonkii sano ee ugu danbaysay ku hayey saldanada Maakhir dagaal dhinac siyaasadeed ah, isku day dil, dagaal aan gabasho lahayn iyo weerar joogto ah.
Dhowrkii qarni ee Saldanadda Maakhir ka soo talinaysay Waqooyiga iyo Koonfurta Soomaaliya labo arimood oo maanta Suldaanka joogaa uu raali ka yahay oo uu sababteeda lahaa horay ugama dhicin Saldanada . Arin kale oo ay gaar u lahayd Saldanada Maakhir intii ay yimaadeen reer galbeedku dalka Soomaaliya, ayaa iyaduna maanta gacanta ka baxday oo uu sababteeda leeyahay Suldaanka Maakhir ee maanta jooga.
Labada arimood ee Garaadaddii iyo Suldaanadii Maakhir soo wada maray ay ka wada sinaayeen, ayaa tan kowaad waxay tahay in degaanada Maakhir uu mar walba ka talin jiray taariikhdeeda hal Suldaan ama hal Gaard oo qura oo aan lays dhex yaaci jirin. Maanta Isimada Maakhir waa badan yihiin sababteeda waxa leh Suldaanka maanta jooga.
Arinta labaad Garaadaddi ama Suldaanadii soo maray Saldanada Maakhir, hadduu ahaan lahaa Garaad Xamar gale oo Koonfurta Soomaaliya ka talin jiray ama Garaad Maxamuud Cali Shire oo ay is hayeen dawladdi Ingiriiska ee Caalamka ugu xooga weynayd, Midkoodna tanaasul uma samayn Saldanadiisa cid kalena uma daba fariisan arimaha saldanadiisa iyo sida ay u shaqaynayso. Maanta Habar Yoonis iyo habar jeclo ayaa Saldanaddi warsangeli marti uga tahay degaankiisa.
Arinta kale ee Saldanada Maakhir gaarka u lahayd, oo ay markii reer galbeedku Soomaaliya yimaadeen ayna ogaadeen awoodda ay Saldanadaas ku leedahay gudaha Soomaaliya, ayeey Suldaankii saldanada Maakhir waxay ugu yeereen “Sovereign of the House of North East of Somaliland Sultanate” and “Sultan of Sultans of Somaliland”. Maanta Muusi Biixi iyo Ciro midna ma ogola in derajadan loogu Yeero Suldaanka Warsangeli. Sababtuna waa Suldaanka maanta jooga oo saldanadiisii ka doortay Siyaasad kana leexday jidkii ay awoowayaashiis isaga dhaxleen.
Ugu danbayntii Saldanadda Maakhir waa taariikh hodon oo qarniyo bada soo jirtay lagana qoray Buugag badan, oo ay ka mid yihiin wixii laga qoray sidii ay canshuurta isaga ururin jireen qarniyo ka hor, habkii ay ciidamada badda iyo dhulka u samaysteen , Odayaashii Ardaa oo la talin jiray Suldaanka talada haya. sidii ay nabdda ugula noolaayeen deriskooda Soomaaliyeed iyo dalka Yamen. Sida ay ula dhaqmi jireen dadka laga tirada badan yahay ama la haYb sooco sida uu qoray badmareenkii caanka ahaa ee Laasqoray yimid 200 sano ka hor. Hadaba maanta in aynu u wada istaagno sidii Saldanada Maakhir looga xorayn lahaa SNM waa mid inoo wada taal dal joog iyo Qurba joogba. Sidoo kale Isimada is caleemo saaray waxay noqon doonaan kuwo loo isticmaalo burburka Saldanada Maakhir
← Culusoow oo Dagaaladii 1964/1977, Ku Tilmaamay Qalad Abdullah bin Zayed: Trump’s travel ban not Islamophobic →